Guriga weelka birta ah ee Shiinaha ee horudhaca ah ee hudheelka ama aqoon isweydaarsiga ama Warshadda wax soo saarka iyo Warshadaha | Yi'an
Nadaafada Nidaamka Guddiyada Sandwich
Nadiifi nidaamka albaabka & daaqada
Guddi darbi jiif ah
Qaybaha Kale ee Darbiyada
Qalabka saqafka qarsoon
Farmashiyaha saqafka ah ee biyuhu jilicsan yihiin
Guddi saqaf ah oo qaraami ah
Qaybaha kale ee saqafka
Nidaamka saqafka ee Al-Mg-Mn
Nidaamka Saqafka Sare ee Tooska ah
Nidaamka Saqafka Tooska ah ee Qufulka
Nidaamka Kahortagga Dhicista Amniga
Nidaamka haynta barafka & dabaysha iska caabinta
Nidaamka Sawir-qaadaha Cagaaran
Nidaamka Dhismaha Dabaqa
C / Z Birta Purlin
Dhismooyinka Qaabka ah
guriga weelka steel prefab mobile for hotel ama wor ...
Guriga Weelka Raaxada Maraakiibta
Nidaamka saqafka hoose ee aluminium magnesium manganese
guri weel bir ah oo prefab ah oo loogu talagalay hudheel ama aqoon isweydaarsi ama hoy
Guriga weelka la qaadan karo ee qaybsan waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo qeexida konteynarka maraakiibta sida saxda ah. Waxay ka samaysan tahay biraha fudud ee prefab oo ah qaab dhismeedka guriga iyo sanduuqa looxa ee derbiga iyo saqafka, ka dibna loo fududeeyo daaqadaha, albaabada, sagxadda dhulka, saqafka, iyo qalab kale oo dheeri ah. Waxaa lagu rakibay qalabka guryaha lagu rakibo ee weelka shaqeeya. Unugyada guryaha weelka ku jira ayaa ah kuwo la qaadi karo oo raaxo leh in si ku meel gaar ah ama joogto ah loogu noolaado.
Guriga weelka la qaadan karo ee qaybsan waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo qeexida konteynarka maraakiibta sida saxda ah. Waxay ka samaysan tahay biraha fudud ee prefab oo ah qaab dhismeedka guriga iyo sanduuqa looxa ee derbiga iyo saqafka, ka dibna loo fududeeyo daaqadaha, albaabada, sagxadda dhulka, saqafka, iyo qalab kale oo dheeri ah.
Waxaa lagu rakibay qalabka guryaha lagu rakibo ee weelka shaqeeya. Unugyada guryaha weelka ku jira ayaa ah kuwo la qaadi karo oo raaxo leh in si ku meel gaar ah ama joogto ah loogu noolaado.
Waxay ku rakiban yihiin awood iyo iftiin waxaana loo heli karaa fursad si ay ugu habboonaato shuruudahaaga.
Gurigan Qaabdhismeedka La Qaadan Karo ee loogu talagalay Dhismaha Goobtu waa mid deggan oo adag oo ku filan inuu siiyo meel diiran shaqaalaha. Booska gudaha waa weyn oo ku filan inuu qabto alaabta guriga loo baahan yahay. Waana wax fudud oo dhakhso leh in lagu rakibo oo la kala jaro. Waqti iyo lacag kuu keydi. Looma baahna in la iibsado dhulka, waxa kaliya oo loo baahan yahay in la kireeyo. Marka ma jiro cadaadis dhaqaale. Maxaa diidaya inaad isku daydo oo aad muujiso noloshaada xiisaha leh?
Waxay sidoo kale si ballaaran loogu dabaqayaa bakhaarka, keydinta, hoyga jiifka, jikada, qolka qubeyska, qolka labiska, qolka shirarka, fasalka, dukaanka, musqusha la qaadan karo, sanduuqa dirista, kiosk mobilada, musqusha moblie, motel, huteel, makhaayad, iyo guryaha la deggan yahay, ku meel gaar ah xafiiska, degenaanshaha dhismaha, boostada taliska kumeelgaarka ah, isbitaalka, qolka cuntada, goobta shaqada iyo bannaanka iyo wixii la mid ah.
Faa'iidooyinka Guryaha Weelka
* Gaadiidka ku haboon iyo kuwa kala duwan, waxaa loo qaadi karaa sida weel maraakiib, ama flat ka buuxaan.
* Si fudud looga saaro masaafo gaaban, waa la rari karaa iyadoo aan la kala go'in.
* Qaabdhismeedka adag ee birta ah wuxuu hagaajiyaa dabaysha u adkaysta, iyo u adkaysiga dhul gariirka.
* Sanduuqa looxa ee darbiga iyo saqafku haysaa dahaadhka wanaagsan, sanqadha, biyuhu.
* Naqshado jilicsan sida aad doorbideyso.
* Deegaanka oo saaxiibtinimo leh. Qashinka looma tuuro.
* Qaybaha guriga waxay noqon karaan kuwo gooni ah iyadoo loo eegayo shuruudahaaga.
* Shuruudo yar oo salka dhulka ah. Ahaanshaha mid adag oo fidsan waa caadi.
Waxtarka Dhismaha 2 shaqaale hal maalin hal cutub
Waqti dheer In ka badan 30 sano
Xamuulka saqafka 0.5KN / sqm (wuxuu xoojin karaa dhismaha sida loogu baahan yahay)
Xawaaraha dabaysha > 240km / h (Heerka Shiinaha)
Iska caabin dhul gariir Weyn 8
Heerkulka Heerkulka ku habboon -50 ° C ~ + 50 ° C
Gidaarka iyo Materiga saqafka: Gudi Sandwich ah
Qaab dhismeedka: Guriga weelka qaab dhismeedka birta fudud
Daaqad: Daaqada Daaqada Aluminium ama daaqadda birta caaga ah
Albaabka: Aluminiumka aluminium albaabkiisa looxa.
Cabbirka: 20 fuudh; 40 fuudh
Xilliga lacag bixinta: 40% T / T, oo ka soo horjeeda amarka iyo dheelitirka la bixiyay ka hor bixinta.
Waqtiga bixinta: Bil gudahood kadib helitaanka lacagta buuxda.
20ft / 40ft Qaabdhismeedka Guryaha Weelka Qaaska ah ee Qaaska ah
Cabbirka dibedda 6058mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) / 12116mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) Isku xirka
Geeska guriga Birta fudud ee horay loo sii diyaariyay
Guddi saqaf ah Rock Wool / EPS rooti rooti ah (sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha)
guddiga Rock Wool / EPS rooti rooti ah (sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha)
Saldhigga dhulka Birta fudud ee horay loo sii diyaariyay
kaabayaal Daaqad 3 / PVC daaqadaha siibanaya
Albaabka 1 / 50mm guddi sandwich ah
Saqafka Beenta ah Saqafka PVC
Sys koronto 2 nalalka & 1 shido
Qalabka ikhtiyaariga ah Alaabta guriga lagu noolaado, xafiiska, hoyga, Musqusha, Jikada, Musqusha, Qubeyska, IWM
Codsiga guriga, xafiiska, hoyga, carport, dukaan, waab, kiosk, qolka shirarka, makhaayadaha, iwm.
Talaabooyinka Rakibaadda Guryaha Prefabricated
Waxaan ku siin doonaa buug tilmaameed buuxa iyo adeegyo iib ah kadib. Mashaariic gaar ah, waxaan sidoo kale u soo diri karnaa injineerkeena si uu kaaga caawiyo inaad guriga ula soo degto adigoo qanacsan.
2, Aasaaska, waxay leeyihiin, aasaas leben iyo aasaas shub ah
3, Ku rakibida qaabdhismeedka birta
4, Haddii ay leedahay dabaqyo badan, rakibidda looxaanta dhulka hoostiisa
5, Saxan bir midab leh oo la rakibay
6, Lakabka koowaad ee dabaqa
7, Albaabada iyo rakibaadda Windows
8, Qurxinta gudaha
Shirkadda Qingdao Xinmao ZT Steel Construction Co., LTD waa shirkad ka mid ah shirkadda si fiican loo aasaasay oo khibrad iyo khibrad u leh soo saarista guryaha kala duwan ee prefab iyo guryaha konteenarrada oo leh tayo wanaagsan iyo qiimo tartan. Waxaa maalgashaday Shandong Qingyun Xinda Color Steel Structure Engineering Co., Ltd., oo la aasaasay sanadka 2003. In ka badan 50 shaqaale R&D ah iyo in ka badan 400 oo shaqaale ah ayaa na taageeraya si aan u helno qaybta suuqa weyn. Shirkadeenu waa shirkad tiknoolajiyad sare oo wax soo saar u janjeedha oo leh nidaam dhamaystiran soosaarka qaab dhismeedka birta iyo rakibida, shirkadu waxay heshay shahaadada tayada caalamiga ah ee ISO9001 iyo Shahaadada Aqoonsiga Qaabdhismeedka Qaab dhismeedka Birta ah Fasalka II.
Waxaan haynaa mashaariic badan oo dhismaha ah dal iyo dibadba, mugdeena iibka ee suuqyada Filibiin waa NO.1, waxaan nahay kuwa ugu fiican uguna kalsoonida badan ee ka ganacsada aaggan, sidoo kale waxaan nahay 3-qeybiyeyaasha ugu sarreeya Pakistan iyo Suudaan. mashaariic laga fulinayo Dubai, Cumaan, Uzbekistan iyo dalal kale. In kabadan 80% waxsoosaarkayagu waa kuwa loo dhoofiyo caalamka, sida Australia, koonfurta America, Europe, America, South Africa, North Africa, Asia, Bariga Dhexe, iyo wadamo kale
Ku soo dhawow inaad si toos ah u booqato warshaddeena.
* Qorshaha qaabeynta waa loo qaabeyn karaa haddii loo baahdo.
* Hordhaca rakibaadda / sawirka CD / rakibaadda ayaa la bixin doonaa haddii loo baahdo.
* Injineerada iyo shaqaalaha waxaa loo diri karaa dibedda si ay u helaan hagitaan iyo rakibid.
* Injineero xirfadlayaal ah oo latalin iyo weydiimo ah.
Hore: guri weel dhaqaale oo horay loo sii qorsheeyay oo jikada lagu noolaado
Xiga: Guriga Weelka Xamuulka ee Prefabricated Container
xirmo prefabricated guri guri weel dhaqaale ...
Prefab qaybsan Weelka House qol House Waayo, ...
Guriga Weelka Weelka Maraakiibta ee Prefabricated ...
Xerada Shaqaalaha Weelka Xerada Weelka On Constructio ...